तपाइँको पार्टनर संग सँगै बस्ने | Law & More B.V.
ब्लग » नेदरल्याण्ड्स मा तपाइँको साथी संग बस्न
नेदरल्याण्ड्स मा तपाइँको साथी संग बस्न
''Law & More मद्दत गर्दछ र तपाईंलाई र तपाईंको पार्टनरलाई निवास अनुमतिको लागि आवेदन प्रक्रियाको सबै चरणहरूको साथ मार्गदर्शन गर्दछ। ''
के तपाईं नेदरल्याण्ड्समा सँगै बस्न चाहनुहुन्छ? यस्तो अवस्थामा तपाईंलाई निवास अनुमति आवश्यक पर्दछ। निवास अनुमतिका लागि योग्य हुनको लागि, तपाईं र तपाईंको पार्टनरले धेरै आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ धेरै सामान्य र विशिष्ट आवश्यकताहरू लागू छन्।
धेरै सामान्य आवश्यकताहरू
पहिलो सामान्य आवश्यकता यो हो कि तपाईं र तपाईंको पार्टनर दुबैसँग वैध पासपोर्ट हुनु आवश्यक छ। तपाईंले पूर्ववर्तीको घोषणा भर्नु पनि पर्नेछ। यस घोषणामा तपाईले घोषणा गर्नु हुनेछ कि तपाईले विगतमा कुनै आपराधिक अपराध गर्नुभएन। केहि अवस्थाहरूमा, तपाईंले नेदरल्याण्ड्स आए पछि क्षयरोगको लागि अनुसन्धानमा भाग लिनुपर्नेछ। यो तपाईंको अवस्था र राष्ट्रीयतामा निर्भर गर्दछ। थप रूपमा तपाईको दुबै उमेर २१ बर्ष वा सो भन्दा बढि हुनुपर्नेछ।
धेरै विशिष्ट आवश्यकताहरू
एक विशिष्ट आवश्यकताहरू मध्ये एक यो छ कि तपाईंको पार्टनरसँग पर्याप्त आय हुनु आवश्यक छ जुन स्वतन्त्र र दीर्घकालीन हो। आय सामान्यतया कम्तिमा वैधानिक न्यूनतम ज्याला बराबर हुनै पर्छ। कहिलेकाँही फरक आम्दानी आवश्यकता लागू हुन्छ, यो तपाईंको अवस्थामा निर्भर गर्दछ। यो शर्त लागू हुँदैन यदि तपाईंको पार्टनरले AOW निवृत्तिभरण युगमा पुगेको छ, यदि तपाईंको पार्टनर स्थायी र काम गर्न अयोग्य छ वा यदि तपाईंको पार्टनर स्थायी रूपमा श्रम सहभागिताको लागि आवश्यकता पूरा गर्न असक्षम छ भने।
डच आप्रवासन र प्राकृतिक सेवाले राख्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विशिष्ट आवश्यकताले नागरिक एकीकरण परीक्षा विदेशमा पार गरिरहेको छ। यदि तपाईं यो परीक्षा लिनबाट मुक्त हुनुहुन्छ भने मात्र, तपाईंले परीक्षा लिनु पर्दैन। के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ कि तपाई परीक्षा लिनबाट स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भने, परीक्षा लिन कस्ता लागतहरू हुन्छन् र कसरी तपाई परीक्षामा साईन अप गर्न सक्नुहुन्छ? जानकारीका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
कसरी आवेदन प्रक्रिया काम गर्दछ?
सबैभन्दा पहिले, सबै आवश्यक कागजातहरू र जानकारी स collected्कलन गर्न आवश्यक हुनेछ, कानुनीकरण र अनुवाद (यदि आवश्यक भएमा)। एकचोटि सबै आवश्यक कागजातहरू स .्कलन गरिसकेपछि निवास अनुमतिको लागि आवेदन पेस गर्न सकिन्छ।
धेरै जसो परिस्थितिहरुमा नेदरल्याण्ड्सको भ्रमण गर्न र 90 ० दिन भन्दा बढि रहनको लागि विशेष भिसा चाहिन्छ। यो विशेष भिसालाई नियमित प्राविधिक निवास अनुमति (mvv) भनिन्छ। यो स्टिकर हो जुन तपाईको राहदानीमा डच प्रतिनिधित्व द्वारा राखिन्छ। यो तपाईंको राष्ट्रियतामा निर्भर हुन्छ यदि तपाईंलाई एमभीभी चाहिन्छ भने।
यदि तपाइँ एक mvv को आवश्यकता छ भने, एक निवास परमिट र एक mvv को लागी एक पटक जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंलाई एक mvv को आवश्यकता छैन भने, बसोबास अनुमति पत्र को लागी एक आवेदन पेश गर्न सकिन्छ।
आवेदन पेस गरेपछि, डच अध्यागमन- र प्राकृतिक सेवाले तपाईं र तपाईंको साथीले सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुन्छ कि गर्दैनन् जाँच गर्दछ। एक निर्णय 90 ० दिनको अवधिको भित्र हुनेछ।
के तपाइँसँग यस लेखको सम्बन्धमा कुनै प्रश्न वा टिप्पणीहरू छन्?
कृपया श्रीमानलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। म्याक्सिम Hodak, मा वकील Law & More मार्फत [ईमेल सुरक्षित] वा श्रीमती। टम मेभिस, वकिल Law & More मार्फत [ईमेल सुरक्षित] तपाईं हामीलाई निम्न टेलिफोन नम्बरमा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ: +31१ (०) -0०-40 3690680 ०XNUMX०।
अघिल्लो पोस्ट नेदरल्याण्डमा शेयरधारकहरूको दायित्व
अर्को पोस्ट नेदरल्याण्डमा मनी लाउन्डरिंग र आतंकवादी वित्त पोषण रोकथाम कानूनको बारेमा व्याख्या गरिएको छ